Kalitaon'ny PCB Assembly - Pandawill Technology Co., Ltd.
Pandawill dia manana dingana fanaraha-maso voafaritra izay miantoka ny kalitaon'ny vokatra rehetra amin'ny alalàn'ny dingana rehetra. Ny rafitra fanaraha-maso kalitao dia misy ny fisafidianana ny mpamatsy, ny fizahana asa aman-draharaha, ny fizahana farany ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Ity dingana ity dia ny fanaraha-maso ny mpamatsy, ny fanamarinana ireo fitaovana miditra, ary ny fikirakirana ireo olana momba ny kalitao alohan'ny hanombohan'ny fivoriambe.
> Ny fanamarinana ny lisitr'ireo mpivarotra sy ny firaketana ny kalitaon'ny kalitao.
> Fanaraha-maso ireo fitaovana miditra.
> Fanaraha-maso ny kalitaon'ny fanaraha-maso ireo fananana voatsongo.
Ity dingana ity dia mifehy ny fizotran'ny fivoriana sy ny fanandramana hampihenana ny fisian'ny kilema.
> Famerenana ny fifanarahana savaranonando: ny fandinihana ny pitsopitsony, ny fepetra takiana amin'ny fandefasana, ary koa ny lafiny teknika sy orinasa hafa.
> Fampivoarana ny torolàlana momba ny famokarana: mifototra amin'ny angon-drakitra omen'ny mpanjifa, ny departemantan'ny injenierantsika dia hampivelatra ny Instruction Manamboatra farany, izay mamaritra ny fizotry ny famokarana sy ny teknolojia ampiasaina hamokarana ilay vokatra.
> Fanaraha-maso ny fizotry ny famokarana: araho ny torolàlana momba ny famokarana sy ny torolàlana momba ny asa mba hiantohana fa voafehy tsara ny famokarana. Anisan'izany ny fanaraha-maso sy ny fizahana ary ny fanaraha-maso.
> Fanaraha-maso kalitao farany: manaova fanaraha-maso maso sy miasa, alao antoka fa mahafeno ny fepetra sy ny takian'ny mpanjifa izany.
> Fonosana: amboary amin'ny kitapo ESD ary alao antoka fa voangona tsara ny vokatra ho an'ny fandefasana.